एनआरएनए साइप्रसको अध्यक्षमा दिलकुमारी पुन - VOICE OF NEPAL
एनआरएनए साइप्रसको अध्यक्षमा दिलकुमारी पुन
३१ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:१५
266 ??? ???????
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) साइप्रसको अध्यक्षमा दिलकुमारी तिलिजा पुन चयन भएकी छिन् ।
एनआरएनए साइप्रसको आठौं अधिवेशनले सर्वसम्मतले उनलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । संघको उपाध्यक्षमा अन्तेश रावत, जसमाया पुन र किस्मत पौडेल चयन भएका छन् । यसैगरी, महासचिवमा कुप थापा, सचिवमा पुरनबहादुर मगर, कोषाध्यक्षमा दिनेश ढकाल चयन भएका छन् । अधिवेशनले युवा प्रतिनिधिमा कुन्दन कार्की, महिला प्रतिनिधिमा सरिताकुमारी चौधरी र प्रवक्तामा दिनेश हरिजम गौतमलाई चयन गरेको छ ।
सदस्यहरुमा कालिका थापा, धिराजनकुमार खड्का, रञ्जित सापकोटा, दयाराम थापा, अन्सरी ओजेर, सञ्जयकुमार मण्डल, राजन श्रेष्ठ, नेतिशकुमार सरदार, सुरज रानाभाट चयन भएका छन् । यसैगरी, सरस्वती खनाल, सरु नेपाल, कल्पना राई र राधा पोखरेल पनि सदस्यमा चयन भएका छन् । २५ सदस्यीय कार्यसमितिको अवधि सन २०२१ सम्म रहनेछ ।
एनआरएनए साइप्रसका निवर्तमान अध्यक्ष सुभास मल्लको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अवैतनिक नेपाली वाणिज्य दूतावासका मानार्थ वाणिज्य दूत डा. रामजीवन पञ्जियार प्रमुख अतिथि रहेका थिए । कार्यक्रममा उनले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको समस्या समाधानका लागि आफूले एआरएनएसंग हातेमालो गरी काम गर्ने बताए । उनले विदेशमा कमाएको रुपैया विदेशमै खर्च गर्नुभन्दा बचत गर्न प्रवासी नेपालीहरुलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा आइसीसी प्रतिनिधि रञ्जित महत, निर्वाचन समिति प्रमुख सुरेशकुमार शाह, सदस्यद्वय विकास दवाडी र यम थापाको उपस्थिति रहेको थियो ।